मलाई बुझ्ने मान्छे आए विवाह गर्न चाहन्छु ! – Online Khabar 24
मलाई बुझ्ने मान्छे आए विवाह गर्न चाहन्छु !
October 13, 2021 by admin admin
धुम थ्री र हिरो नं १ मा नायिकाका रूपमा खेलिसकेकी रायमाझीले धेरै म्युजिक भिडियोहरुको म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छन्। उनी अहिले दरबारमार्गमा रहेको आफ्नै क्युुुुुुइ रोधी नामक दोहोरी साँझमार्फत सांगीतिक यात्रामा जमिरहेकी छन्।
यिनै सुन्दरीसँग प्रेम विवाह सांगीतिक क्षेत्र लगायतका विषयमा भवनाथ प्याकुरेलले लिएको अन्तर्वार्ता आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ । पत्रकारले सोेधेको बिहेबारे केही सोच्नुभएको छ भन्ने प्रश्नहरुमा विवाहबारे अहिले केही सोचेकी छैन।
भोलिका दिनमा मलाई बुझ्ने मान्छे आए विवाह गर्न चाहन्छु भन्ने जवाफ दिएकी छिन । तपाईं कस्तो जीवनसाथी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा मलाई मेरो परिवारलाई पनि बुझ्ने केटा जीवनसाथी होस् भन्ने चाहन्छु। जसले मलाई रुवाउने काम नगरोस्। ग्लामर क्षेत्रलाई छोड नभनोस्।
युवायुवतीबीच हुने प्रेम कस्तो लाग्छ भन्दा राम्रै लाग्छ म प्रेम गरेरै विवाह गर्छु। त्यो भयो भने बुझ्न पाइन्छ भन्ने जवाफ दिईन । तपाईंलाई प्रपोज गर्ने कति आए मलाई प्रपोज गर्ने १ हजार जति आए होलान्।
म्यासेजमा कहिले विवाह गर्ने बूढी भनेर जिस्क्याउँछन्। तपाईंलाई कस्ता केटा मन पर्छ भन्दा सफा हेन्डसम स्मार्ट नरम र सबैको इज्जत गर्ने व्यक्ति मन पर्छ। तर अहिलेको जमानामा माया र इज्जत गर्ने धेरै पाइँदैनन् भन्ने जवाफ दिईन राम्रा केटा देख्दा मन कस्तो हुन्छ भनेर सोध्दा मेरो भइदियोस् जस्तो लाग्दैन।
तर उसको आनीबानी देख्दा उसलाई सुहाउने केटी मिलोस् भन्ने लाग्छ। ब्वाई फ्रेन्ड परिवर्तन गर्नेलाई के भन्नुहुन्छ मलाई त्यसो गरेको मन पर्दैन।
धुम थ्री र हिरो नं १ मा नायिकाका रूपमा खेलिसकेकी रायमाझीले धेरै म्युजिक भिडियोहरुको म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छन्। उनी अहिले दरबारमार्गमा रहेको आफ्नै कुईन रोधी नामक दोहोरी साँझमार्फत सांगीतिक यात्रामा जमिरहेकी छन्। अहिले लक डाउनमा सामाजिक सञ्जालमा खुवै अपडेट छिन । उनले बोल्ने गाउले लवज धेरैले मन पनि पराउछन साभार गरियको खबर ।
Prevयी अभागी आमा जस्ले दशैको मुखमा आफ्ना २ छोरीलाई गुमाईन !
nextछोरा पक्राउ परेको दिन देखि सुतेकै छैनन् शाहरुख र गौरी, एनसीबीलाई फोनमा यस्ता प्रश्न गर्छन् !